Marc Ravalomanana « Tsy hihemotra mihitsy aho , « Sahy Mijoro ho an’i Gasikara . TiaTanindrazana. | «Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← Tsingerintaona ny Tim. Ny 8 Jolay 2017. Fanambarana sy tranga izay niafara teny Faravohitra. Horon’antsary…
Faravohitra, 10 Jolay 2017. Fanambarana, Marc Ravalomanana. →
Marc Ravalomanana « Tsy hihemotra mihitsy aho », « Sahy Mijoro ho an’i Gasikara ». TiaTanindrazana.
Tao no niarahan’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ireo vahiny nasaina manokana, izay nahitana ireo mpanao politika isan-tsokajiny teto amin’ny firenena sy ireo vahiny samihafa. Naneho ny hafaliany tamin’ny fifanatrehany tamin’ny rehetra izy. 15 taona miampy 2 taona no nidirany teo amin’ny sehatra politika ary 44 taona teo amin’ny sehatry ny fandraharahana. Nahita ny fahasahiranana tamin’ny 17 taona lasa aho, hoy i Marc Ravalomanana.
Niala tamin’ny tsy misy aho ary tsy nahalala politika saingy efa manan-kolazaina kosa amin’izao. Raha nisy fanafintohinana sy tsy fitovian-kevitra na zavatra nahatezitra dia hialana tsiny, hoy izy. Aoka ny lasa homba ny lasa. Minoa ianareo ahy. Nivoy ny fanajana ny fihavanana sy ny fahalalana izay antoky ny fiaraha-miasa hahafahana mampandroso an’i Madagasikara aho. Tsy misy tonga lafatra, mila mifamela ny rehetra. Raha 15 taona no jerena, nahafahana tsara nampandrosoana ny firenena, azo tanterahina tsara izany, hoy izy. Noraisiny ohatra i Chine sy Singapour, izay niroborobo tao anatin’ny taona vitsy, ary azontsika tanterahina tsara, hoy izy.
Matotra, manaja lalàna
Mikasika ny ho firotsahany, dia nilaza izy fa tsy hihemotra. Tsy i Marc Ravalomanana no hihemotra. “Never give up”, hoy izy. Tsy maintsy manaja ny tany tan-dalàna kosa isika, ary tsy maintsy mampiseho amin’izao fotoana izao fa antoko “mahalala, mahay ary mahavita”, antoko miara-miaina amin’ny tantsaha sy ny eny ambanivohitra. Antoko mahay mifandray amin’ny mpamatsy vola sy ny firenena matanjaka. Mila tany tan-dalàna manaja ny demokrasia sy ny maha olombelona.
Nilaza i Marc Ravalomanana fa hanaja ny lalàmpanorenana sy ny fitsarana mahaleotena. Notsiahiviny ihany koa fa tsy misy firenena afaka ny hiolonolona na tsy manana masoivoho, ka afaka mandroso. Tsy maintsy ezahintsika ny mifanerasera sy misokatra hahafahana mifampizara traikefa. Anisan’ny zava-dehibe indrindra ny tontolon’ny teknolojia. Tokony hanana ny paikady vaovao na ny fahaizana miainga amin’ny teknolojia hifanaraka amin’ny zava-misy eto Madagasikara. Ary farany ny fahaizana miara-miasa mba hahafahana manatontosa ny asa. Efa vonona tanteraka amin’ny paikady hoenti-mampandroso ny firenena ny tenany, fa fotoana sisa andrasana.
Toky R sy Ramano F. TiaTanindrazana.
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué Hotel Carlton Madagascar, Marc Ravalomanana, Tiatanindrazana gazety, Tim Marc Ravalomanana. Ajoutez ce permalien à vos favoris.